Izindatshana zikaBryan Martech Zone |
Imibhalo nge Bryan
I-WP Setha kabusha i-plugin ekuvumela ukuthi usethe kabusha isiza sakho ngokuphelele ngokuphelele futhi ngokwengxenye lapho kuphela izingxenye ezithile zebhulogi yakho ezifakiwe kuzinguquko. Ukusetha kabusha ngokuphelele kuyazichaza, kususa konke okuthunyelwe, amakhasi, izinhlobo zeposi yangokwezifiso, ukuphawula, okufakiwe kwemidiya, nabasebenzisi. Isenzo sishiya amafayela emidiya (kepha asiwabhalisi ngaphansi kwemidiya), kanye nokuhlanganiswa okufana nama-plugins nokulayishwa kwetimu, kanye nazo zonke izici eziyinhloko ze
NgoLwesine, ngoMashi 21, 2019 NgoLwesine, ngoMashi 21, 2019 Bryan
Imakethe yanamuhla esemthethweni iya ngokuya incintisana. Ngenxa yalokhu, lokhu kufaka ingcindezi enkulu kubameli abaningi nasezinkampanini zabameli ukuthi bagqame kulo lonke umncintiswano. Kunzima ukulwela ukuba khona kochwepheshe online. Uma isayithi lakho lingaphoqeleli ngokwanele, amaklayenti adlulela kwabancintisana nabo. Kungakho, umkhiqizo wakho (futhi ofaka iwebhusayithi yakho) kufanele ube nomthelela omkhulu ebhizinisini lakho, kukusize uthole amaklayenti amasha, futhi uthuthukise